#OromoProtests Sabboontoonni ilmaan Oromoo biyya Uganda magaalaa # -
#OromoProtests Sabboontoonni ilmaan Oromoo biyya Uganda magaalaa #
bilisummaa May 12, 2014	Leave a comment
Kampala jiraatan,mootummaa biyyattii irraa hiriira bahuudhaaf hayyama dhabanillee,maqaa hawaasa Oromoo biyya Uganda-tiin walitti qabamuudhaan ajjeechaa fi hidhaa mootummaa wayyaanee mormuun,hiriira nagayaa hawaasaa fi barattoonni Oromoo godhaa jiran kan deeggaran tahuu dubbatan. Barattootaa fi ummata Oromoo wareegamaniifis duungoo qabsiisuudhaan yaadatanii jiru.Kana malees,Barattootaa fi hawaasa Oromoo biyya keessatti rakkinni irra gahee fi gahaa jiru.toora dandahame hundaan akka deeggaran ibsaniiti jiru.
Hawaasni Oromoo biyya Ugandaa Oromoota biyyoota garaa garaa keessatti hiriira bahanii sagalee keenya addunyaa dhageessisaa jiran irraas baay’ee akka gammadan wal gahii kanarratti dubbatanii jiru. Xumura irratti manguddoo fi abbootii amantii eebba godhameen wal gahii isaanii goolaban.
Previous We the Oromo Community of Chicago, as planned and announced on the day of the protest rally will hold a fund raising event..
Next Minn. Oromo hold vigil for students protesting in Ethiopia